Software-ka sida Codsiyada Soo-jeedinta Adeegga ah
Xalalka SaaS ee Soo Jeedinta: La Taabalin karo iyo Octiv
Khamiis, Juun 8, 2010 Axad, Disembar 4, 2016 Douglas Karr
Qoraalkani waa mid xiiso leh tan iyo markii aan aqaan labada shirkadood ee soo saaray kuwan nidaamyada soo jeedinta… Oo waxay ku sugan yihiin halkan Indiana! Waxaa laga yaabaa inay tahay wax loo yaqaan 'Purdue and Anderson University University'! Sproutbox horumaray Laheli karo iyo Sayniska Istuudiyaha ayaa hadda sii daayay Oktoobar (hore TinderBox), labadaba softiweerku waa xalka soo jeedinta adeegga ee shabakadda.
Soo-jeedin waa xal qiimo jaban, laga bilaabo $ 19 aasaasiga ah, $ 29 ee pro iyo $ 79 bishiiba koox. Oo ay weheliso Sare isdhexgalka, waxay umuuqataa inay tahay nidaam aad uqurux badan abuurka iyo dirida soojeedinta nuxurka leh - iyo waliba la socodka dhaqdhaqaaqa rajada ee helitaanka soojeedinta
Waa kuwan fiidiyow la xiriira alaabtooda:
Sida waxkastoo ay taabtaan kooxda Kristian, Oktoobar sifiican loo safeeyey oo laga soo qaadaa halka laga yaabo inuu ka baxo. Xidhmada heerka gelitaanka waxaa loogu talagalay kooxda iibka $ 79 bishiiba xirmooyinkana waxay u koraan $ 999 bishii iyo ilaa macaamiisha Enterprise. Octiv sidoo kale waxay leedahay kor u qaadista qayb bixinta iyo astaamo kale oo gaar ah.
Iyo fiidiyowga Octiv:
Labada barnaamijba waxay bixiyaan nidaam isgaarsiineed oo ku saabsan jawaab celinta iyo la socodka horumarka soo jeedinta. Waan ku faraxsanahay fursadaha labadan nidaam ee soo-jeedineed. Sida isticmaale daacad ah Qaan-sheegashada buugaagta cusub, Runtii waan jeclaan lahaa inaan arko isdhexgalka nidaamyadan iyo Buugaagta Freshbooks! Buug-gacmeedka cusubi wuxuu leeyahay nidaam qiyaas qallafsan (nooc qabyo-qoraal ah) oo loo diri karo macmiilka oo dib loo eegi karo, laakiin ma lahan dhammaan astaamaha Proposable ama Octiv.
Waxaan ugu hambalyeynayaa Kristian soo saarista badeecadan. Shaki kuma jiro in isaga iyo kooxdiisa ay ku guuleysan doonaan! Shirkadda calaamadeynta ee Kristian waa mid ka mid ah kuwa adduunka ugu fiican. Haddii aan haysan lahaa softiweer ahaan wax soo saarka adeegga oo aan doonayo in si habboon loogu calaamadeeyo koritaanka ganacsiga, shirkadiisu had iyo jeer waxay noqon doontaa dookhayga.
Tags: raadinta beddelaadwarbixin funneloctivla soo bandhigi karofalanqaynta hayntaWarbixinta Bulshada
Mahadsanid Blogger! Waxqabadka Cabashada DMCA
Jul 8, 2010 markay ahayd 9:22 AM
Waad ku mahadsan tahay xusuusta TinderBox Doug. Waxaan bilownay beta bishii Janaayo waxaan helnay jawaab celin macmiil oo cajiiba maaddaama sheyga uu horumar sameeyay Waxaan maskaxda ku haynaa faallooyinkaaga Freshbooks!
Jul 8, 2010 markay tahay 3:29 PM
Waad ku mahadsantahay madaxbanaanida loo soo jeedin karo! Way fiicantahay in la ogaado laba qaybood oo softiweer ah oo soo-jeedin weyn laga sameeyay halkan Indiana!
Jul 8, 2010 markay tahay 3:32 PM
Jeclow, Doug! Wax kasta oo KA + A sameeyaa waa qurux badan, laakiin waxaan jeclahay awoodda soo jeedinta iibinta ee la-soo-jeediyaha iyo falanqaynta. Qoraal weyn. Mahadsanid!
Jul 8, 2010 markay tahay 3:57 PM
Brad, nasiib ayaan u leenahay inaan ku helno ganacsato heer sare ah gobolka. Waan jeclahay wax soo saar kasta oo ka soo baxa Sproutbox shirkadduna waxay noqotay mid la yaab leh. Wanaagsan!
Jul 9, 2010 markay ahayd 8:28 AM
Doug: Waad ku mahadsan tahay qorista qoraal weyn oo ay ka muuqatay TinderBox. Waxay ka dhigan tahay wax badan oo aad waqti ku qaadatay inaad dib u eegis ku sameyso wixii aan soo ururinay. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay fursadda iyo tayada wada-shaqeynta maxalliga ah.
Sida dhibic caddaynta - KA + A iskaashi la leh dhismaha TinderBox la-hawlgalayaashayada at Gravity Labs, Dustin Sapp iyo Mike Fitzgerald - laba xiddigood oo dhagax weyn oo ka tirsan bulshada ganacsiga ee Indy.